APỊARA M UBE ITARI IRI ANỌ NA ASATỌ KA M WERE LỤỌ DI – hoo!haa!!
Otu nwagbọgọbia di afọ iri atọ na itolu, na-alụbeghị di ma jirikwa anya icha ọkụ na-achọ di, ekwuola ka onye pastọ si pịa ya ube itari iri anọ na asatọ ka ya nweta di ga-alụ ya.
Adaeze Josephine Ụlọma bụ onye Ọlụ, di na steeti Imo, nọrọ n’ihu igwe ndi bịara ụka beputa anya mmiri dị egwu n’Asaba, ụbọchị Ụka gara aga mgbe ọ na-akọwa n’ụlọ ụka, ka ya siri gwuo ọtụtụ mmiri dị egwu ka ya wee nweta nwoke ga-alụ ya.
Ọ gwara ọgbakọ ụlọ ụka ahụ na ọtụtụ ụmụ nwoke abịarala ya ije di mana emechaa ha-agbaa abịakwaghị m maka na ajọ mụọ nke iwe nakwa ọtụtụ ajọ akparama agwa ndi ọzọ bi n’ime ya. Ọ sịrị na ajọ mụọa ebiela n’ime ya afọ iri na ise ma kwukwa na o meela ya ka ya si na nkwụ fere n’ụkwa ebe ya na-achọ ọgwụgwọ. Ọ sịrị na yabụ ọnọdụ emeela ya ka ya gaa na nke ọtụtụ ndi pastọ ijabu.
Nwada Ụlọma sịrị na nsogbu ya malitere mgbe ya jụrụ ilụ di otu nwoke si steeti Enugu bịara ya di. Ọ sị na ka ọ dịsịrị ọnwa ole na ole ya jiri jụ ilụ nwokea, ka ya nwetara onwe ya n’ọnọdụ oke iwe n’ọnụma mgbe ọbụla na ndụ ya. Ọ sịrị na nkea tinyere ya na ilụso nwoke ọbụla kwuru ya okwu di ọgụ. N’okwu ya, ‘anam akụpụ nwoke ọbụla bịaram nso nkpụrụ ọkwụrụ n’anya’.
N’ime anya mmiri ọ sịrị na ndụ ya juputara n’ihe ọgbụgba ama.
Ọ kwuru na ọbụ maka na ya jụrụ ịlụ nwokea si steeti Enugu ka ụwa ji dị ya otua. O kwukwara na akpọgala ya na nke ọtụtụ ndi isi ụka akụrụ aka tinyekwara nke otu ụlọ ụka nke dị n’ogbe Ezenei Avenue bụ ebe anọrọ pịa ya ọnụ ube itari iri anọ na asatọ.
Josephine sịrị na ka nkea gasịrị, na ya rahụrụ ụra nkeji iri abụọ ma kunie were jide nwoke pastọ pịara ihe wee kụnye ya isi aba okpu. Ọ sịrị na ya kụgidere pastọa ihe o were ọnụ ya taa aja.
O kwuru na nsogbu ya esiteghị na iñụ mmanya na-aba n’anya na ígbó.
Nwagbọgọa gara n’ihu kwue na mgbe ihe ndia na-aga, na nne na nna ya chere na ya kpachara anya ma jụ ịlụ dị. Ọ sịrị na ha jere kpọtara ya onye si obodo Lọndọn ka ọ bịa lụọ ya. Ọ kwuịrị na mgbe ya soro nwokea rute Lọndọn, na ha nwere obere esem okwu, ya were jide nwokea ma kụpụ ya ajụ n’anya. Nkea mere eji si Lọndọn gbara ya ụgbọ nwa mkpi, kpọchighata ya Naijiriya. Ma mgbe na-adịghị anya ka o siri Lọndọn lọtq ka o jiri mata na ọnwụ na-egbu ya bụ nwa ọkụkọ si n’elu abia, tupu akpọta ya n’ụlọ ụka King’s Chapel.
Ọ sịrị na mgbe akpọtara ya na ya bụ ụlọ ụka ka onye amụma ụlọ ụka ahụ naputara ya n’aka ajọ mụọa.
Josephine sịrị na ka anapụtachara ya n’aka ajọ mụọa, na ụmụ nwoke di otu naari na iri abụọ abịarala ya di mana ya ka na-asa anya na mmiri iji mara onye nke Chukwu chọrọ ka ọ lụọ ya.
Previous Post: CHAỊNA KA NA-AGA N’IHU IMECHI ỤLỌ EKPERE NILE